Naya Bikalpa | » उद्योग वाणिज्य महासंघमा चुनावी महासंग्राम : व्यवसायीकता जाेगाउने की राजनीति राेज्ने ? उद्योग वाणिज्य महासंघमा चुनावी महासंग्राम : व्यवसायीकता जाेगाउने की राजनीति राेज्ने ? – Naya Bikalpa
प्रकाशित मिती: २०७७ मंसिर ११, १६: ०९: ३३
काठमाडाैं- नेपाल उद्याेग वाणिज्य महासंघको नयाँ नेतृत्व चयनकालागि प्रतिस्पर्धा तिव्र देखिएकाे छ। नेतृत्व चयनकालागि ५४ औं वार्षिक साधारणसभा विहिबार सम्पन्न भएकाे छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन पछि विधिवत आरम्भ भएकाे महासंघकाे चुनाव यहि मंसिर ११, १२ र १३ गते काठमाडौंमा सम्पन्न हुने छ ।
महासंघकाे चुनावी प्रतिस्पर्धावाट नयाँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहितकाे कार्यसमित चयन हुनेछ । नेपाल उद्याेग वाणिज्य महासंघकाे विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतहः अध्यक्ष निर्वाचित हुने भएकाले वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गाेल्छा अध्यक्षमा निर्विराेध निर्वाचीत हुने छन् ।
महासंघको विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वत अध्यक्ष बन्ने प्रावधान भएपनि पछिल्लो समयमा हटाउने प्रयास भएको थियो । तर अन्तिममा उक्त संशोधन प्रस्ताव रोकिएको थियो ।
महासंघको चुनाव नजिकिँदै गर्दा चहलपहल र प्रतिस्पर्धा तिव्र बनेकाे छ। मतदातालाइ आफ्नाे पक्षमा पार्न दुवै पक्ष अन्तिमा प्रयासमा देखिन्छन् । नयाँ नेतृत्वमा पुग्न वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा किशोर प्रधान र चन्द्रप्रसाद ढकाल विच प्रतिस्पर्धा हुने छ । दुवै पक्षले आफ्ने समुहकाे मनाेनयन दर्ता गराएका छन् ।
महासंघकाे वर्तमान अध्यक्ष भवानी राणा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गाेल्छा समुहले पछिल्लाे समय महासंघमा देखिदै गएकाे राजनीतिक प्रभाव र त्यसबाट सिर्जना हुँदै गएकाे विक्रिती राेक्न सबैमा आग्रह गरेका छन् ।
अध्यक्ष राणा, उपाध्यक्ष गाेल्छा लगायत पूर्व पदाधिकारीहरूले वरिष्ठ उपध्यक्षका उम्मेद्वार चन्द्र ढकाल समुहले महासंघमा राजनीतिक प्रभाव जमाउने खाेजेकाे भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार किशोर प्रधान समुहलाइ अप्रत्यक्ष रूपमा सहयाेग गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा विशिष्ट सदस्य चण्डीराज ढकाल तिनै चन्द्र ढकालकाे पक्षमा खुलेर उभिएपछि ढकालमाथीकाे आराेप एक हदसम्म पुष्टि भएकाे सस्थांपन पक्षकाे दावी छ ।
चण्डिराज ढकाल गैर ब्यावसायीक र राजनीतिक पुर्वाग्रहमा रहेर महासंगमाथी बदनाम गर्ने प्रयास गरेकाे भन्दै महासंघकाे वर्तमान कार्यसमितिले खेद प्रस्ताव नै पारित गरेकाे थियाे। चन्द्र ढकालले चुनाव जिते महासंघमा राजनीतिक प्रभाव र विकृत्ती सस्थागत हुने आशंका संस्थापन पक्षमा देखिन्छ ।
महासंघका पूर्व अध्यक्ष चण्डिराज ढकालले महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छालाई बद्नाम गर्न खाेजेकाे आराेप लागेकाे थियाे। ढकाल विरूद्व प्रस्ताव अध्यक्ष राणा पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छा, उपाध्यक्ष किशाेर प्रधान लगायत पूर्व पदाधिकारी एक ठाउँमा उभिएका थिए ।
तिनै पूर्व अध्यक्ष चण्डिराज ढकाल वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्र ढकाल समुहलाइ जिताएर प्रतिशाेध लिने दाउमा छ । तर उनलाइ चन्द्र ढकालाइ जिताउन भने त्यति सहज देखिदैन ।चन्द्र ढकालमाथि व्याक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्न पटक पटक राजनीतिक प्रभावमा परेकाे आराेप लाग्दै आएकाे छ ।
किशाेर प्रधान समुहले उद्योग वाणिज्य महासंघकाे नेतृत्वमा पुग्न ढकालकाे यहि कमजाेरीलाइ समेत बाहिर ल्याउदै महासंघलाइ राजनीतिकाे क्यान्सर उन्मूलन गर्ने , महासंघलाइ व्यावसायीक संस्थाकाे रूपमा विकास गर्न आफ्नाे समुहलाइ जिताउँन खुला आह्वान गरेकाे छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले समेत महासंघ भित्रको राजनीतिक क्यान्सरलाई उन्मूलन गर्नका लागि पनि किशाेर प्रधानकाे समुहलाइ टिमलाई जिताउन आग्रह गरेका छन् ।
काेराेना संक्रमण, बढदाे वेराेजगारी तथा परनिर्भरता बढदै गएकाे अवस्थामा अर्थतन्त्र इतिहासकै कमजाेर अवस्थामा पुगेकाे छ । यस्ताे कठिन अवस्थामा देशकाे अर्थतन्त्रलाइ पुनर्जिवन दिन महासंघको अध्यक्ष बन्न लागेको जानकारी दिँदै शेखर गाेल्छाले आफ्नाे कार्यकाल सफल बनाउँन वरिष्ठ उपध्यक्षमा किशोर प्रधान, एसोसिएट उपाध्यक्षमा सौरभ ज्योति, वस्तुगत उपाध्यक्षमा अञ्जन श्रेष्ठ, जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा दिनेश श्रेष्ठ र उनीहरुको टिमलाई जिताउन आग्रह गरेका छन् ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेद्धार किशोर प्रधानले आफु २८ वर्ष यता उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । देशको अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि पनि महासंघलाई राजनीतिबाट टाढा प्रतिवद्वता प्रधान समुहले गरेकाे छ । प्रधान समूहबाट वस्तुगत उपाध्यक्षमा अन्जन श्रेष्ठ, जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा दिनेश श्रेष्ठ र एसोसिएटमा सौरभ ज्योतिले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।
शेखर गोल्छा समर्थनमा रहेकाे प्रधान समुहले महासंघलाइ थप उचाइ प्रदान गर्ने उदेश्यले भिजन मिशन समेत तयार पारेकाे छ । जसमा आर्थिक बृद्विदर १० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष राखिएकाे छ ।
उता वरिष्ठ उपध्यक्ष पदका अर्का उम्मेद्वार चन्द्र ढकालले पुरै प्यानलै खडा गरी चुनावी प्रतिष्पर्धामा उत्रिएका छन्। चुनाव आफ्नो पक्षमा पार्न ढकाल समुहले जधाभावी गरेकाे र निर्वाचनकाे मर्यादा र आचार संहिता भत्काएकाे आराेप लागेकाे छ ।
ढकालले आफ्नो समूहबाट उद्योग वाणिज्य संघ समूहको उपाध्यक्षका लागि गुणनिधी तिवारी, वस्तुगत संघ समूहबाट उपाध्यक्षका लागि उमेशलाल श्रेष्ठ र एशोसिएट सदस्य समूहको उपाध्यक्षका लागि रामचन्द्र संघई उम्मेदवार भएको घोषणा गरेका छन् ।
ढकालले कोरोना भाइरस(कोभिड १९) ले सिर्जना गरेको चुनौती सबैको सामूहिक प्रयासमा पार लगाउने बताउँदै आएका छन् । ढकालले निम्न आय भएका संघलाई कम्तिमा बार्षिक पाँच लाख रुपैयाँको आम्दानीको श्रोत जुटाउनका लागि मोडल बनाउने तयारी भैरहेकाे ढकाल समुहले दावी गरेकाे छ ।
उद्यमशीलता बिकासका तालिम दिने, एक गाउँ एक उत्पादन जस्ता कार्यक्रमलाई लागू गर्ने विषय पनि हाम्रो प्राथमिकता ढकाल समुहले चुनावी मुद्दा बनाएकाे छ । देशमा औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न, वैदेशिक लगानी भित्रयाउन, नयाँ प्रविधि भित्र्याउन, निजी क्षेत्रको सृजनात्मक भूमिका बढाउने बताएकाे छ ।
ढकाल समुहले आफ्नाे चुनावी मुद्दामा व्यावसायीक क्षेत्रमा देखा परेका समस्या समाधान गर्न र व्यावसायीका हकहित तथा अधिकारका लागि सरकारसँग लविङ्ग गर्ने , महासंघलाई ठूला उद्यमीहरुको मात्रै नभई साना र मझौला उद्योगी व्यापारीको पनि साझा चौतारीका रुपमा स्थापीत गर्ने एजेण्डा ढकाल समुहले अगाडि सारेकाे छ ।
२०७७ मंसिर ११, १६: ०९: ३३